Imibhalo ka-Roman Sulla mayelana Martech Zone
Imibhalo nge URoman Sulla
URoman ungene emhlabeni wedatha yedijithali ngonyaka we-2013. Ukwazile ukubamba iqhaza kuzinkomba eziningi: unjiniyela wangaphambili, ukuhola phambili, ukuhola kwezentuthuko, umnikazi womkhiqizo, kanye neNhloko yoMkhiqizo. Ngenxa yalokho, wabamba iqhaza ekwakheni i-tracker yokuchofoza; Amathuluzi e-CRM ama-ejensi; amathuluzi wokuhlela nokuhlaziya izinqubo zokuthenga abezindaba; kanye ne-web-service yomphakathi ukuxhuma abathengi namakhasimende nokuqinisekisa ukusebenzisana okusebenzayo phakathi kwabo. Kusukela ngo-2019 ubesebenza Mvu